Cliff House Obibi Izu Ụka - Imewe Mmewe
Obibi Izu Ụka
Obibi Izu Ụka Nke a bụ ụlọ azụ azụ nwere ihe nlere anya na ugwu, na mmiri nke Oke Osimiri ('Tenkawa' na Japanese). Ejiri ihe siri ike mee, ọdịdị ahụ bụ tube dị mfe, mita isii. A na-agbanye imechi akụkụ okporo ụzọ ahụ ma dochie ya nke ọma na ala, nke mere na ọ na - esite na mmiri wee na - esetịpụ ya n'elu mmiri. Nhazi ahụ dị mfe, ime ụlọ sara mbara, na ọdụ ụgbọ mmiri ahụ na-emeghe ka igwe, ugwu na osimiri. Ewubere n'okpuru ọkwa okporo ụzọ, naanị ụlọ elu ụlọ ka a na-ahụ anya, site n'okporo ụzọ, yabụ na ihe owuwu anaghị egbochi nlele.
Aha oru ngo : Cliff House, Aha ndị na-emepụta ya : Masato Sekiya, Aha onye ahịa : PLANET Creations Sekiya Masato Architecture Design Office.
Obibi Izu Ụka Masato Sekiya Cliff House